Faafaahin Qarax lagu weeraray Hotel ku yaalla xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Faafaahin Qarax lagu weeraray Hotel ku yaalla xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho
Faafaahin Qarax lagu weeraray Hotel ku yaalla xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho
Qarax weyn ayaa ka dhacay goor dhow magaalada Muqdisho caasimadda Somalia.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay xeebta Liido ee Degmada C/casiis, gaar ahaan Elite Hotel oo ah hotel caan ah oo ku yaalla Xeebta Muqdisho.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday Gaari lagu dhuftay derbiga hotelka, waxaana la maqlayaa rasaas, sida ay soo weriyeen dad ku sugan goobtaas.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ka dib ay Hotelka Elite gudaha u galeen dabley ka tirsan Al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha.
Waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo qarax iyo weerar toos ah oo lagu qaaday Hotelka Elite ee xeebta Liido oo ka tirsan degmada C/casiis ee magaalada Muqdsho.
Weerarka ayaa ku bilowday Qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday qeybta hore ee Hotelka, kadibna waxaa la maqlay rasaas, iyadoo dable hubeysan oo ka tirsan Alshabaab ay gudaha u galeen Hotelka, sida laga soo xigtay dadweyn ku sugan goobta.
Ilaalada Hotelka ayaa dagaal la galay dableyda weerartay hotelka, waxaana weli socda rasaasta ay is-weydaarsanayaan labada dhinac.
“Koox hubeysan oo ka tirsan Xagjirka Alshabaab ayaa weerar loo adeegsaday qarax iyo dabley hubeysan ku qaaday Hotel Elite oo ku yaalla xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho, rasaas ayaa hadda ka dhaceysa gudaha Hotel-ka…” ayuu yiri afhayeenka Wsaaradda Warfaafinta oo qoraal soo dhigay baraha bulshada.
Waxaa cakiran xaalada goobtaas iyadoo dad badan ay ku go’doomeen gudaha hotelka, waxaana gaaray ciidamo badan oo kuwa amniga ah oo wada howlgal samata bixin ah welina ma cadda khasaaraha weerarkan.
Waxaa isa soo taraya warar hordhac ah oo ku saabsan Khasaaraha ka dhashay weerar iskugu jira qarax iyo mid toos ah oo ka socda Hotelka Elite oo ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan shan qof ayaa illaa hadda la xaqiijiyey iney ku dhinteen, halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana suuragal ah in khasaaraha nafeed uu intaas ka bato maadaama weerarku socdo weli.
Dadka ku dhintay weerarka ayaa waxaa ka mid ah Alle ha u naxariistee agaasimihii xiriirka gobollada ee Wasaaradda Warfaafinta Cabdirisaaq Cabdi sida ay xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Wasaarada.
Wasiirka Warfaafinta XFS Maxamed Cabdi Xayir ayaa ka tacsiyadeeyay geerida agaasimhii xiriirka gobolada ee Wasaaradda & dadkii kale ee ku dhintay weerarkii ka dhacay Liido.
Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta Galmudug Axmed Dhiblaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka dhaawacmay Sawir qaade Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsan howl wadeennada TV-ga Qaranka ee ku hadla codka dowlada & Fanaanad Faiza Beela oo ka tirsan Kooxda Heegan ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Maxamed Ibrahim Macallimuu oo ah Xoghaya Guud ee Ururka Isku-taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ka soo badbaaday oo Gudaha Hotel ku jiray Xilliga Weerarka, waxaana la fadhiyey xilligaas Agaasimaha Dalxiiska ee Wasaaradda Warfaafinta oo halkaas ku dhintay
Rasaas xooggan ayaa weli laga maqlayaa gudaha iyo hareeraha Hotelka Elite oo ay ka dhex dagaalamayaan dableyda ka tirsan Al-shabaab. iyadoo ciidamada amaanka ay wadaan howlgal lagu soo afjarayo weerarka, laguna soo badbaadiyo dadweyne ku go’doonsan hotelka oo xaaladooda aan la ogeyn.
Faafaahin Qarax lagu weeraray Hotel ku yaalla xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho was last modified: August 16th, 2020 by Admin
Dhageyso: Maxay Tahay Muhiimada Ay Leedahay Waxbarashada Gabdhaha?
Booliiska Mareykanka oo shaaciyay xogta qof isku qarxiyay goob ay ka socotay xaflad Diimeed
Dhageyo:-Qeybtii 2-aad ee Tartankii Caawa oo Xaafada Daarusalaam B ku hartey.
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Kulan La Qaatay Ku-xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobay Ee Arrimaha Soomaaliya